Daafacii ugu adkaa uu ka hor yimid, kulankii ugu muhiimsanaa ee xirfadiisa, abaal-marinta Ballon d’Or & dhowr arrimood uu ka hadlay Benzema - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
July 29, 2020 at 09:48 Daafacii ugu adkaa uu ka hor yimid, kulankii ugu muhiimsanaa ee xirfadiisa, abaal-marinta Ballon d’Or & dhowr arrimood uu ka hadlay Benzema2020-07-29T09:48:50+02:00 CAYAARAHA
(Madrid) 29 Luulyo 2020. Weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema ayaa ammaanay saaxiibadiisa kooxda, wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin ciyaartooyda adduunka ugu fiican.
Dhinaca kale weeraryahanka reer France ee Karim Benzema ayaa sheegay inuu ku fikirayo abaal-marinta Ballon d’Or, balse uusan ku waalneyn.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Karim Benzema, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Sanadkan waa waqtigeygii iigu fiicnaa, haatanna meel fiican ayaan ku jiraa, La Liga waa tartanka ugu fiican aniga ahaan, sababtoo ah waxaa qeyb ka ah ciyaartoy wanaagsan isla markaana ciyaara kubad wanaagsan”.
“Ku fikirida inaan helo Ballon d’Or? Dabcan aniga waan ku fikiraa xilli kasta tan iyo markii aan yaraa, laakiin taasi micnaheedu maahan inaan ku walaanahay, balse waad ku qasban tahay inaad sameyso arrintaas markaad ciyaartoy tahay”.
Intaas kaddib Karim Benzema ayaa shaaca ka qaaday daaficii ugu adkaa uu ka hor yimid xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, wuxuuna yiri:
“Waa labo, waana Sergio Ramos iyo Raphaël Varane, sababtoo ah waxaan maalin walba kaga hor tagaa tababarka”.
“11-ka ciyaartoy ee adduunka ugu fiican? Dabcan waa ciyaartoyda Real Madrid”.
“Ciyaartii ugu muhiimsanayd xirfadeyda ciyaareed? Dhamaan kulamada waxay ahaayeen kuwo muhiim ah, waxaana jira ciyaaro badan oo aad muhiim u ahaa, sidaas darteed waxaan dhihi doonaa dhamaan kulamadii finalka ahaa ee aan ciyaaray”.
« Defuse tensions in key Somali region
DEG DEG:-Wariye C/Casiis Axmed Gurbiye oo xukun lagu riday »